CHELSEA OO GUULAYSATAY KADIB SCOLARI , INTER OO XEJISATAY HOGAANKA , BERCELONA OO LA TUMAY | Toggaherer's Weblog
MARAYKANKA OO KA CODSADAY LIBIYA BAADHITAANKA TAARIIKHDA DHABTA AH EE SHEEKH SHARIIF
ka dib markii la ceydhiyay tababaraha reer Brazil ee ay lahaan jirtay kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa kooxda Chelsea weli waxaa ka muuqda hoos u dhac ka dib markii ay si dirqi ah gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda Astonvilla oo kaalinta sadexaad ay ku wada baratamayeen.
Kulankan oo ahaa kulunkii ugu horeeyay ee horyaalka Ingriiska ee kooxda Chelsea uu leylinayo macalinka Ruushka ee Guus Hidink, inkastoo uu ku bilaabay guul hadana kooxda sidii hore ma aysan ku soo noqon.
Anelka ayaa gool dhaliyay qeybtii hore ee ciyaarta ka dib markii uu kubad qyurxoon ka helay ciyaaryahan Lampard tasoo u suura gelisay inuu si dhib yar ah shabaqa ugu hubsdo.
Dhinaca kalena kooxda manchester United ee lagu naaneeyso shayaadiinta cas cas ayaa guushooda iska sii wata iyagoo haatan horyaalka ku haya sideed dhibcood inkastoo liverpool oo ku soo xigta ay caawa ciyaari doonto. Manchester ayaa waxaa ay ku badisay 2 iyo 1. Goolka hore waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Roney.
Lakiin laacibka kooxda Blackburn Santa Cruz ayaa bar bareeyay qeybtii hore ee ciyaartana 1 iyo 1 ayay ku soo idlaatay, ka dib markii la isku soo laabtay ayaa ciyaaryahan Ronaldo laacibka addunka waxa uu dhaliyay goolkii guusha sidaasna ay Manchester United ku yeelay 62 dhibcood halka koxda ku soo xigt ee Liverppol ay leedahay 54 dhibcood inkastoo kulan kooxda ay ciyaarayaan maanta, Chelsea ayaa gusheed waxa ay u keentay inay soo gasho kaalinta seddexaad oo waxa ay leedahay 52 dhibcood, waxaa kaalinta afaraad ku jirta Astonvilla oo sanadkani kacsan waxayna leedahay 51 dhibcood, Arsenal oo ay haleysan tahay maalmahan ayaa bar bardhac 0 iyo 0 ah la gashay kooxda Sunderland taasna waxa ay dhaxalsiisay inay yeelato 45 dhibcood oo kaalinta shanaad ah.
Horyaalka talyaaniga ayaa isan Meel xiiso leh maraya waxaa Kooxda Inter weli laga dhigi la’yahay hoganka ka dib markii ay 2 iyo 1 ku dardartay Bologna oo guriigeeda lagu ciyaarayay ciyaaryahan Bollateli ayaaa goolka guusha u saxeexay kooxda Inter sidaasna ay weli baaqi ku sii tahay horyaalka talyaaniga waxaana ay ku heysaa 59 dhibcood halka kooxda ku soo xigta ee Juventus ay leedahay 50 dhibcood.
Juventus waa ay badisay kulankii ay 2 iyo 0 kulan ay la yeesheen kooxda Palermo waxaana gool ka hore u saxeexay xiddiga ay kala yimaadeen kooxda Liverpool ee u dhashay dalka Mali ee Mohamed Sisoko, halka gooolka labaad uu u dhaliyay ciyaaryahan David Trezeguet oo lagu naaneeso terezegooool, Juventus ayaa u eg inay ka soo kabsaneyso bar abrooyin iyo guul darooyin soo wajahay kulamadii ugu danbeeyya ee ay ciyaareysay.
Kooxda Roma ayaa iska soo garguuraneysa iyadoo u soo carareysay inay ku soo biirta kooxaha ku hardamaya horyaalka talyaaniga . Roma ayaa waxa aay 1 iyo 0 kaga badisay kooxda Siena waxaana goolkaasi u saxiixay ciyaaryahan Taddei. Roma waxa ay ku jirtaa kaalinta afaraad oo ay ka soo mid noqotay kooxaha Champions League u gudbaya hadii ay ku adkeysato.
Milan ayaa iyada ku jira kaalinta seddexaad waxa ayna leedahay 45 dhibcood waxaana Milan ay ciyari doontaa galabta iyadoo ay wada kulmi doonana kooxda Cagliari iyadoo ciyaartaasi ay ka dhaceyso garoonka Sansiro Stadium.
Horyaalka Spian ayaa waxaa haatan xowli ku soo socta kooxda Real AMdrid oo Champions League ay ku soo dhacayaan Kooxda Liverpool kulankeeda xalay waxa ay 6 iyo 1 kaga badisay kooxda Rael Betis, bandhiga goolasha waxaa ka qeyb qaatay ciyaaryahan Higin oo goolka hore dhaliyaya, Huntelaar ayaa isna labo goolka oo isku xigta dhaliyay, raul xidiga weyn ayaa isna Labo gool oo isku xigta saxeexay ka dibna ciyaaryahan Ramos ayaa soo qatimay goolasha.
Barceloana ayaaa iyana lagu dubtay 2 iyo 1 kulan derby ah oo ay la ciyaareen kooxda Espanyol, guuldaaradan ayaa ah tii ugu horeysay ee Barcelona la kulanto an iyo intii uu horyaalkani bilowday. Lama oga labadii ciyarood ee u danbeeyay waxa ku dhacay kooxdii loo sadaalinayay inay qaadi doonta Chamopions League.
barcelona weli iyada ayaa hogaanka u heysa 00 leh 60 dhibcood waxa ay 10 dhiboocd ka saareysaa kooxda Real Madrid oo si xowli ah ku socota ka dib markii bilowgii horyaalka ay agabis aheyd.
Warqabadka Ciyaaraha ToggaHerer
Mubarik Y Muse